Ciidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka oo kuwada dagaalamey degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Ciidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka oo kuwada dagaalamey degmada Wanlaweyn ee...
Ciidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka oo kuwada dagaalamey degmada Wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose.
Ciidamo kawada tirsan kuwa dawlada federalka soomaaliya ayaa maanta ku dagaalamey gudaha degmada wanlaweyn ee gobolka Sh/hoose,kuwaasoo geystey khasaare badan oo naf iyo maal ah.
Dagaalka ayaa ka bilawdey kadib markii ay qaar askarta kamid ahi damceen in ay ka qaadaan qaar kale oo isbaaro u tiil magaalada dhexdeeda,waxeyna ka madax adeygeen in ay isbaarada ka qaadaan magaalada dhexdeeda,hase yeeshee waxey noqotey in si khasab ah looga qaado oo lala dagaalamo.
Khasaaraha ka dhashey dagaalka ka dhacey magaalada dhexdeeda ayaa lagu soo waramayaa in uu keeney dhimasho 5 qof ah iyo burburka guryo iyo hanti ma guurto ah,mana aha markii ugu horeysey ee ay ciidamo ka wada tirsan dawlada ay ku dagaalamaan meelaha ay maamusho dawlada federalka ahi,waxeyna tani kusoo beegmeysaa iyadoo wasaarada gaashaandhiga dhawaan loo magacaabey madax cusub oo sheegey in ay isbedel ku sameynayaan dhismaha ciidamada soomaaliya.
Previous articleWafdi uu hugaaminayo m/weyne Xasan Sheekh oo u dhoofey dalka Ethiopia.
Next articleGaari ay leeyihiin ciidamada Amisom ee Yugandha oo si bareer ah u jiirey qof rayid ah wadada Maka almukarama.